Ndilukhupha njani ugcino Windows 10? - Khipha
Eyona > Khipha > Khipha ukonga okupholileyo- sisombulula njani
Khipha ukonga okupholileyo- sisombulula njani
Ndilukhupha njani ugcino Windows 10?
Cofa kwiqhosha lokuqala (okanye ucinezeleIWindowskey) ukuvula imenyu yokuQala, cofa kwiiSetingi phezulu. Cofa kwiApp kunye neempawu kwimenyu yasekhohlo. Ngasekunene, khangelaUkongaCoolkwaye ucofe kuyo, emva koko ucofe kuKhiphaiqhosha. Cofa aphaKhiphaukuqinisekisa.
-Ngoko ke abanye benu bashiye amagqabantshintshi kwinqaku lethu lakutshanje 'Ukwazisa i-AMD's Threadripper 2 2990WX CPU' ngokugqume kwikona esezantsi ekunene kwescreen sam endicele ukuba ndenze iWindows. Ngoku abanye benu bebehlekisiwe kwaye abanye benu bekhathazekile. kodwa bonke babenento enye ngokufanayo.
Awunakucinga ukuba kutheni umbutho ofana neLinus Media Group, omnye unabaxhasi abanjengeCableMod, ene-configurator ngoku equka ukhetho lwasemva lwe-RGB enokubuyisela ukubonakala kwe-GPU kunye nee-SSD zakho. Iyahambelana neAura Sync, RGB Fusion, Mystic Light Sync, kunye neeCableMods 'zekiti zeRGB. Kwaye unokufumana kwikhonkco elingezantsi.
Kutheni umbutho ofana neLinus Media Group enabaxhasi ngolu hlobo kuya kufuneka isindise ikhulu leedola apha naphaya kwikopi esemthethweni yeWindows. Ewe kutheni singathethi ngayo? (Umculo owonwabileyo) ke masiqale ngokufumana iphepha-mvume lokungena kwi-stack, ngokukhethekileyo leyo uDenis angayisebenzisiyo. Ngendlela, bendikufumene oku kwi-NCIX, ke kucacile andiphumanga ndaya kubathengela leyo yinkqubo esemthethweni yokufaka iiWindows kwiPC.
Kule meko, yibhentshi yam yovavanyo endihlala ndinayo apha kwilayisensi yeofisi yam yokwenza eli nqaku, liyacaphukisa kuba iyinyani Windows 10 Ilayisensi yePro, kodwa kubalulekile ukuba ndifumane inqaku lam lokukubonisa uyenza njani iWindows isebenze, kwaye inokusebenza njani kwibhentshi yovavanyo, kwaye ke, siya khona. Yovulo Windows 10 Ipro Windows yenziwe yasebenza ngelayisensi yedijithali. Ewe, masithi ndisebenza kwinto efana noqwalaselo lwekhadi lemizobo.
Ngokwesiqhelo kwezi meko sifumana isitaki samakhadi emizobo silungile. Ke emva kokuba sibale iibhentshi zethu kwikhadi elinye, sayivala inkqubo satshintshela kwenye. Inye kuphela ingxaki encinci kuloo nto.
Iiseva zikaMicrosoft zokuvula zenza isazisi esikhethekileyo kwiPC yakho ngokusekwe kwizixhobo zehardware ezifakwe kuyo. Ke uyabona, sisindile kwimizobo yokutshintsha ikhadi apha, kodwa xa izinto ezininzi zitshintshile masithi uqhubeka nokutshintsha amakhadi emizobo, ufuna ukubona ukuba inkqubo iqhuba ngesiqingatha sememori, uyitshintshe i-CPU, okanye mandundu Kuya kufuneka utshintshe ibhodi yomama. Nokuba ungazama iqonga elahlukileyo okanye njengendlela yokujongana neengxaki, into enokwenzeka kukuba esi sichongi sinokutshintsha.
Kwaye andiqondi ncam ukuba igqiba njani xa inyuka utshintsho kodwa ukuba iyayicela iWindows ukuba iyikhubaze, besikhe sayijonga le nto phambi kokuba siqale kwaye ibingavunyelwanga okwangoku. Ke oku kuyahlekisa kuba kule bendikhe ndaya kude nditshintshe i-boot drive ebendiyisebenzisa, kodwa ndikwazile ukufumana into malunga ne-ID yehardware kwaye ndakwazi ukufudusa ilayisensi. Kodwa inqaku kukuba, uya kuyifumana loo nto ngokukhawuleza ngexesha elithile.
susa umcuphi kumqhubi
Ngoku, kwiintsuku zakudala, kwaye ndiyaqikelela ukuba ibiyiminyaka esixhenxe okanye esibhozo eyadlulayo isisombululo kwi-activation ekhawulezileyo yayikukufowunela i-Microsoft ukuba isebenzise inombolo yomnxeba, zama inkqubo yokuvuselela okuzenzekelayo, uhambe ngale ndlela yempazamo kabini, ibiyile nto ibifana ne-10. umzuzu ucofe iqhosha oza kulifaka kummeli, chaza ukuba ubeke ezinye zehardware yakho kwaye kufuneka usete iphepha-mvume lakho kwakhona. Kodwa elo yayilixesha kwaye lalingeyonto iqinisekileyo. Ngapha koko, ndiyakhumbula ndingena kwimpikiswano entle eshushu nommeli owandixelela ukuba ndiphelelwe kukuphinda ndisebenze kwimeko yam yokusebenzisa, ebandakanya ukutshintsha rhoqo izixhobo ngokulandelelana kwazo ukuyivavanya.
Ndifanele ndithenge iphepha-mvume elitsha ngalo lonke ixesha ndicelwa ukuba ndenze iWindows watermark. Kwaye ndiyathetha, wathi akukho nto anokuyenza kwaye ngaxesha lithile ndashiya (ngokungacacanga) yayiyincoko emnandi. Kodwa eyam inqaku yile, nokuba ebenyanisile, phantsi kwemiqathango yelayisensi kaMicrosoft, ndilungile nam.
Andinakulindelwa ukuba ndithenge ilayisensi entsha yeWindows ngalo lonke ixesha kuphuma izixhobo ezintsha kwaye ndinento yokwenza nebhentshi yam yovavanyo. Ngethamsanqa ngelo xesha, ndinobhaliso kwiTechNet, inkonzo yokubhalisela isoftware ekuvumela ukuba usebenzise isoftware yeMicrosoft kwindawo engenzi yorhwebo kunye nokusebenza okungasikelwanga mda - ukufuna inzuzo endizenzileyo ezi mvavanyo, ubuncinci yayintle de iTechNet ivalwe ngo-2013. Ngoku indlela entsha esemthethweni yokuhambisa iphepha-mvume lakho kukujongana neengxaki kusebenze.
Ke uyayibona into endiyenzileyo ngoku, ndiye ndadibanisa nje ilayisensi yam yedijithali kwiakhawunti yeMicrosoft. Ke andikaze ndiyenze le nto ngaphambili, kodwa kwithiyori kufuneka sikwazi ukutshintsha idrive singene kwimenyu yokuseta kwaye sifudukele kwilayisensi siye kwenye ikhompyuter, epholile kwaye ingcono kunenkqubo endala. Ke masizame oku, akunjalo? Ke asizukubonisa ukuba isebenza njani kanye njengoko iiseva zikaMicrosoft zisebenza ngendlela engaqondakaliyo, kodwa iyonke iyavakala ukuba ayinabuhlungu.
Kuya kubakho isicelo sokudlulisa iphepha-mvume lakho, i-blah, i-blah, i-blah, i-blah, i-blah, njl. Njl., Into, ewe, abanazo naziphi na izikrini. Yintoni lo nto? Ngapha koko, ekugqibeleni, nokuba uyisusa njani ilayisensi yakho, imigaqo ithi ekugqibeleni uyakuphelelwa kukusebenza.
Kodwa ngale ndlela, kwaye mhlawumbi ezinye zexabiso eliphantsi lama- $ 20 amaqhosha eWindows onokuwafumana kwimithombo yentengiso engwevu kwi-Intanethi, akufuneki kubekho nasiphi na isizathu sokuba iWindows watermark yenziwe, akunjalo? Njengokuba kufanele ukuba silume nje imbumbulu kwaye siqhubeke nale nkqubo. Ngaphandle kwengxaki enye. Ezi zitshixo zingama-20 uzithengayo kwi-Intanethi azenzelwanga iNyakatho Melika okanye intengiso yase-US yaseYurophu kwaye ke azikho semthethweni.
Ke ukuba ususa i-watermark kwinkqubo yakho zoba umgca kwaye oko kukunceda ulale ebusuku oko kulungile. Kodwa into malunga nesoftware kukuba imigaqo yelayisensi evela kwi-EULA yokuba ufunda le nto yokuqala ayixhomekekanga ekubeni isitshixo senziwe sasebenza okanye asisebenzi ngeeseva zikaMicrosoft. Umzekelo, i Windows 10 VM endiyisebenzisela ukwaphula okukude- ndibeka ukufikelela komnye wabasebenzi bethu abasebenza ngaphandle, ngokuchasene nemigaqo yelayisensi kaMicrosoft.
Ndifumene kuphela izolo xa bendilungiselela eli nqaku. Ngokwesiqhelo Windows 10 inokuba ngobuchwephesha ayisetyenziselwa kuphela ukufikelela kude. Okukhona uyazi, akunjalo? Ukuba unomhlobo onesivumelwano selayisensi yevolumu okanye isitshixo sesiza naso asikho semthethweni.
Iya kusebenza kuwe kwaye isuse i-watermark, kodwa iseyindlela yokuphanga isoftware nokuba yeyiphi na indlela yasimahla yokuqinisekisa ukuba le watermark ayiphinde ivele nakweliphi inqaku lethu kodwa inokuba ibandakanya isoftware yentengiso engwevu okanye ulwaphulo-mthetho. Ke kwimeko enye yokusetyenziswa engaxhaswanga kunjalo, yonke into yethu apho sineebhentshi zovavanyo ukuqinisekisa i-Hardware, esona sisombululo sisifumeneyo kukugcina isoftware ikhubazekile ngonaphakade. Nantsi ke into efakiweyo yesiqhelo, kwaye ngekhe uqaphele oku ngaphambili, kodwa iMicrosoft inendlela eyakhelweyo yokusebenzisa iiWindows ukulungiselela iinjongo zokuvavanya apha.
Kuxhomekeka kuguqulelo lweWindows, ixesha onalo liya kwahluka. Xa sisenza, nangona kunjalo, ukunqakraza nje ukutsiba endaweni yokungena kwimveliso ephambili, ufakelo lweWindows luya kuqhubeka ngendlela eqhelekileyo. Sisaza kufumana uhlaziyo lweWindows, ukusebenza kwehardware akuyi kuchaphazeleka nangayiphi na indlela, akusayi kubakho mfuneko yokuba sichithe ixesha sicinga ngezinto ezingenamsebenzi ezisebenzayo.
Kwaye elam icala, ndilala ngokunyanisekileyo ebusuku ndisazi isitaki sam samaqhosha eWindows ngaphezulu kokugubungela ezantsi kweemesti zovavanyo esizibonileyo, ke ukuba uya kuze ubone i-watermark yethu yovulo nakweliphi inqaku lethu uya kuqonda ukuba ndilungile Ukuphepha uxwebhu, akunanto yakwenza nokonga imali Windows 10 Ukuba ufuna ukugcina imali, iAnker ezayo ye-SoundCore Flare + ayizukunceda ugcine imali kuba ungafuna ukuyithenga. Sisithethi esingenazingcingo esivumela ukuba wandise i-atmosfere ngokuma kwayo kwindawo enesandi esingama-360, unokhetho lokubhangqa ezimbini kwezi zithethi zesandi sestereo kunye nomboniso wazo okhanyayo ohamba nomculo wakho Inqanaba le-IPX-7 liyigcina. Iqela lephuli livunyiwe kwaye limelana nokuchitheka kwemvula kunye nemvula ngokulula, kwaye nokuntywiliselwa ngokupheleleyo emanzini. Ibhetri enkulu yomthamo iya kuhlala umculo wakho ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 kwaye unokukunceda ukubiza isixhobo sakho ngaxeshanye.
Jonga ikhonkco elingezantsi ukuze ufunde ngakumbi ngesi sithethi kwaye ube nethuba lokuphumelela enye. Ke enkosi ngokujonga abafana. Ukuba awulithandanga eli nqaku ungalicofa eli qhosha kodwa ukuba uyalithanda qhubeka ubhalisela kulo okanye mhlawumbi ucinga ngokufumana apho ungazithenga khona izinto esizibonisileyo kwikhonkco kwinkcazo yenqaku.
Ngokuqinisekileyo, jonga Windows 10. Ngelixa uphantsi apho ungandwendwela ivenkile yethu yokuthengisa ezona shirts zipholileyo ezinje ngale kunye neqonga lethu loluntu. Ngokuqinisekileyo kufuneka uthathe inxaxheba.
Ndikususa njani okupholileyo?
Ungayisusa njani ipholile-iinkonzo. I-xyz ihambisa kwakhona (UkususwaIsikhokelo)
INYATHELO 1:Khiphaiinkqubo ezinobungozi ezivela kwiWindows.
INYATHELO 2: Sebenzisa iiMalwarebyte ukuyasusa uPholile-iinkonzo. ...
INYATHELO 3: Sebenzisa iHitmanPro ukuskena ii-malware kunye neenkqubo ezingafunekiyo.
INYATHELO 4: Phinda ujonge iinkqubo ezinobungozi ngeZemana AntiMalware Simahla.
(umculo omnandi) -Ndenze inqaku kwithuba elidlulileyo malunga nendlela enomdla yokuhamba kwamehlo ethu. Ibizwa ngokuba yindlela yokuhambisa iliso ngokwakho, kodwa sisizathu sokuthetha malunga nokuba iingqondo zethu zilawula njani amehlo ethu kuba iyothusa nyhani, kodwa eneneni ndiyigqumelele ngento enomdla ngokwenene. Jonga le modeli yokulinganisa iliso lomntu kwaye ucinge ngendlela ahamba ngayo amehlo akho.
Oku kuvumela amehlo akho ukuba enyuke esihla. Ke unezihlunu ezibini apha, kwaye apha izihlunu ezingaphezulu zitsala iliso lakho phezulu, umsipha ongezantsi utsala iliso lakho ezantsi ngoluhlobo. Amehlo akho anokuhamba ngapha nangapha, kananjalo.
Ke unesihlunu apha kunye nesihlunu apha emacaleni akho. Esi sihlunu sitsala iliso lakho liye kwelicala, esi sihlunu sitsala iliso lakho kwelicala. Kodwa ngokwenene unemisipha emibini.
Ke ezintandathu zizonke. Unayo enye ephezulu kwaye enye kumaqhosha afana nale misipha itsala iliso lakho ngale ndlela, umsipha ongezantsi utsala iliso lakho ngale ndlela. Ngamanye amagama, ungaliqengqa iliso lakho xa ucinga ngesigama esisetyenziswe kwindiza, une-pitch yenqwelomoya, i-yaw yenqwelomoya, kunye nomqulu wenqwelomoya.
Ke ezi zihlunu ziqengqeleka ngeliso lakho. Ngamanye amagama, ajikelezisa iliso lakho kwi-axis engumda wokubona wakho. Kodwa kutheni kufuneka ususe iliso lakho ngale ndlela? Kukho izizathu ezibini, eyokuqala kukufumana umfanekiso ozinzileyo kwi-retina yakho.
Oko kubaluleke kakhulu kumbono ocacileyo. Ngokwenyani, xa ususa intloko yakho ngapha nangapha kwaye unyuke usihla, amehlo akho aya kwelinye icala. Kukuchasana okugcina amehlo akho elungelelanisiwe.
Umthombo wokuqhekeka esd
Ke, njengoko uhambisa intloko, uhlala usalatha kumfanekiso ofanayo kwi-retina yakho kwaye unciphise intshukumo yokukhanya. Kwenzeka into efanayo xa uguqula intloko yakho isiya ngapha nangapha, ujikelezisa amehlo akho kwicala elichaseneyo ukuze ufumane umfanekiso ozinzileyo kwi-retina yakho. Yenzeka ngokwamanqanaba.
Amehlo akho ajike ngobunono emva koko utsiba ubuye umva emva koko ngobunono ujike emva koko utsibe kwaye xa uphinda ugoba intloko kufana nokuba uloliwe kwaye ubukele umhlaba udlula, Amehlo akho aya kulandela umthi ngobunono. kwaye uphinde ubuye umva emva koko ulandele ngobunono umthi olandelayo uphinde ubuye umva. Kwaye kwakhona kukugcina umfanekiso ozinzileyo kwi-retina yakho. Ayisiyonto ilula kangako ukubona iliso lijikeleza ngaphandle kokuba ligazi ngokwenene, ndinethamsanqa, isizathu sesibini kukugcina ukuqonda okunzulu, kuyila umfanekiso wesipereogram apha.
Ukujonga lo mfanekiso, kuya kufuneka ujonge ngapha nangapha iipensile ezimbini kwaye kufuneka uphume njengomfanekiso ombini-ntathu. Ukuba ubukele oku esweni elikhulu, kungafuneka ubuyele umva kwenye okanye usondeze inqaku kwiscreen, okanye utshintshe ukulijonga kwifowuni. Ndiyathemba ukuba ngelo xesha ungatyibilika ngokwaneleyo ukugqobhoza ezo zikhonkwane kwaye ubone inguqulelo yazo ye-3D.
Ukuba ufuna ixesha lokwenza oko, nqumama kwinqaku ngoku. Kodwa ngoku ndiza kulinganisa iliso lakho lasekhohlo lijika kancinci. Ndifuna ukuba ubone ukuba ayenzeki.
Kungenxa yokuba okwangoku isezantsi sepensile siza kuwe kwaye umphezulu wepensile uhamba kude kuwe. Kodwa jonga, njengoko ndijikeleza omnye wale mifanekiso, umphezulu wepensile ungqubeka kuwe. kwaye ezantsi ipensile isuka kuwe.
Unembono engeyiyo ngobunzulu balo mfanekiso. Kubalulekile ke ukuba ulungelelanise amehlo akho omnye komnye kukuqonda okuchanekileyo kobunzulu. Isishwankathelo, zimbini iindidi zentshukumo yokuhamba kwamehlo.
Kukho olu hlobo lubizwa ngokuba yi-cycloversion egcina umfanekiso ozinzileyo kwi-retina kukhutshwa xa ipropathi ekhoyo sele ikhethe ukwenza enye into. Kwaye olu phawu lokukwazi ukuhambisa amehlo ngale ndlela luphuhliswe kookhokho bethu, ababenamehlo kumacala eentloko zabo njengale. Ngendlela, izilwanyana ezixhwithekileyo zinamehlo ngapha kwentloko ngolu hlobo.
Ke unembonakalo ye-panoramic, ungabona amarhamncwa esiza. Ngelixa irhamncwa elikhohlakeleyo linamehlo ajonge phambili. (Inja ke uphulukana naloo mbono ujikelezayo, kodwa ufumana ukuqonda okunzulu okungaphezulu.
Ke cinga ngeli xhoba lithambekisela umzimba walo ngapha nangapha ukuze lifumane umfanekiso ozinzileyo kwi-retina yalo ndizamile ukubonisa apha ngeziphumo ezingasemva Akulunganga, kodwa ikunika umbono, akunjalo? Uhlobo, ke cinga malunga nokuba kuhamba ngantoni kweso silwanyana sixhaphakileyo, amehlo ayahamba ukuze amehlo aguquke ukujonga phambili, ilingana nelo Ukuhamba kwamehlo, kuyilelwe ukugcina umfanekiso ozinzileyo kwiretina, kwakhethwa ukugcina okuhle ukuqonda ubunzulu. Ukuhamba kwamehlo kukuxhuzula. Ngamanye amagama, ukunganyanzeliswa kokuziphatha kwangaphambili kwi-Ancestors yethu eyayinamehlo emacaleni entloko yabo Ubungqina bokuqala boku kukuba irudimen kubantu abaziphethe kakubi apho.
Indlela yokuziphatha okanye umkhwa esiwugcinileyo kookhokho bethu bokuzivelela esingasayifuniyo. Kwaye kule meko, kubonisiwe kuvavanyo lokuba xa umntu ejonge phambili okanye ngasemva, bashukuma ngokulula kakhulu, ngokungathi amehlo abo asemacaleni entloko kwaye bezama ukuzinzisa umfanekiso kwi-retina. Incinci kakhulu.
Khange ndikwazi ukurekhoda ngekhamera yam, kuphela nam kwistudiyo sam, kodwa yasekwa ngokuzama. Ubungqina besibini bokuba ukuphazamiseka kwemithambo-luvo okanye ukonzakala kubangela ukuba isigulana sibuyele kwindlela yokuziphatha yookhokho bayo. Ngamanye amagama, xa isigulana sithembele phambili okanye sibuyele umva, amehlo aso ayacutheka ukuba yi-cyclovergence g.
Kwaye uyazi, ayisiyiyo le ndlela yokuziphatha icekeceke, kodwa ikwenza ngokuchanekileyo, ngokungathi amehlo abo emacaleni entloko. Kungenxa yokuba kwingqondo yethu sinesakhelo semithambo-luvo sokuziphatha kookhokho bethu bokuzivelela kwezinto, ukuba sineenkqubo ezongezelelekileyo zokwenza imithambo-luvo ukucinezela loo ndlela yokuziphatha kwaye siyenze le nto siyifunayo. Kunjengokuba unale khowudi yelifa kwingqondo yakho ekufuneka uyigcinile.
Ke ulinde isoftware ukuba incamathele ngaphezulu, kwaye ukuba loo nto iyaqhekeka, ubuyela kwindlela yakudala. Luhlobo lwesikweko sendlela umhlaza osebenza ngayo ngokwenene. Sinale nkqubo yakudala ithi phindaphinda, phinda, phinda.
Kwaye emva koko wongeza ulawulo olucinezela le ndlela yokuziphatha. Kodwa xa olunye lolo lawulo lwaphukile, isandi sibuyele kuloo ndlela indala siyiphindaphindayo, siyaphindaphinda, siyaphinda. Ndifundile amanye amaphepha ophando anomdla apho banokufundisa abantu ngokuzikhupha amehlo, nto leyo iyamangalisa, njengokujija kwesidanga se-30 emva kweentsuku ezili-10 zokuziqhelanisa.
Kwakunjalo, andinakukufumanisa ngokwenyani ukuseta kokuvavanywa kunye nento endinokuyifumana, kubonakala ngathi kunzima kakhulu, njengoko kuthatha, uyazi, izibane ezidanyazayo kunye nezixhobo ezizodwa kunye nezinto ezinje. Ke andinakukwazi. Endaweni yoko, ndenze oku ngenxa yovavanyo, hayi nje ukukopela.
Ndiyenzile ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Indlela yokuqala yayikukunxiba isigcina-ntloko esinentaba yekhamera kunye neelensi ezinkulu kwiliso lam, emva koko ujonge amehlo am ukuze ikhamera ibe ngaloo ndlela kwiliso lam. Indlela yesibini yayikukuma nje phambi kwekhamera ithambise intloko yam emva koko yazinzisa imifanekiso kunye neZiphumo zekamva ukususa iirotator.
Kwaye okokugqibela, bendijonge nje umfanekiso ojikelezayo kwaye wawufota. Isizathu sokuba ndifune ukwenza ezi zinto zintathu kukuba ingqondo yakho ithathe isigqibo sokuhambisa isiseko seliso lakho ngokujonga ingxelo evela kwiinkqubo ezimbini ezahlukeneyo. Kukho uluvo lokulinganisela okanye ulungelelwano onalo.
Ngamanye amagama, umhlaba wakho wangaphakathi ukuxelela imeko yentloko yakho ngokunxulumene nomhlaba womxhuzulane, ikwazisa malunga nokukhawulezisa kunye nokuqhelaniswa okufanayo kwentloko yakho emajukujukwini, kwaye inokubuyisela olu lwazi emehlweni akho ukubaxelela ukuba ngokwabo kufuneka bajike. Inokufumana ulwazi kwinto eza emehlweni. Ke xa iliso libonayo lijikeleza, ingqondo yakho inokukutolika oko kujikeleza kwaye uxelele amehlo akho ukuba ijikeleza kwicala elichaseneyo lomfanekiso ozinzileyo kwiretina.
Zibaluleke kangakanani ezi zinto zimbini? Ke ukuba ndibeka ikhamera enokukhanya kwendandatho ekhanyayo entloko, kuphela kwento endiyibonayo. Ke xa ndoyamisa intloko yam bendifumana nje ulwazi kumqondo wokulinganisela. Thelekisa loo nto xa ndibona nje umfanekiso ojikelezayo kule meko, bendifumana nje ulwazi emehlweni.
Kodwa xa bendime nje phambi kwayo ndinekhamera ndithambise intloko, ndadibanisa zombini ezi nkqubo. Ndifumene ulwazi kumqondo wokulinganisela kunye nolwazi emehlweni am. Kwaye ndafumanisa ukuba uziva ungacaphuki, ukuba yinkcukacha yakho yenkqubo yokubonakalayo, uya kufumana ujikelezo oluninzi ukuba yimvakalelo yakho eseleyo.
Kodwa ufumana eyona ntshukumo xa ninobabini ngaxeshanye, evakalayo, akunjalo? Kungenxa yokuba le yeyona ndlela inokwenzeka yokuba umntu ahlangane nomfanekiso ojikelezayo kuba iintloko zabo zijikeleza. Ibali elingaqhelekanga lokuvela kwamehlo lokujikeleza kwamehlo. Eli nqaku lixhaswe yiNordVPN.
Ndihlala ndisithi wenza uphando lwakho kwi-VPNsit kwaye uthathe isigqibo sokuba le yinkonzo oyifumana iluncedo. I-VPN ibhala yonke itrafikhi evela kwikhompyuter yakho. Emva koko uyayichaza kamva aze emva koko ahambe aye kwindawo yakhe yokugqibela.
Sele uyazi ukuba yeyiphi iwebhusayithi ofuna ukuyindwendwela umboneleli wesevisi, okanye uyazi ukuba yeyiphi i-Wi-Fi hotspot oyisebenzisayo, abanakubona ukugcwala kwakho. Inika kwakhona ukungaziwa komhlaba. Ngenxa yokuba iinkonzo ozisebenzisayo azinakuxela ukuba uphi.
Konke abakwaziyo yindawo yokuphela, onokuhamba ngayo ngokuthanda kwi-NordVPN. Oko kuyanceda kwizinto ezinjengeenkonzo ze-geo-fence njengeenkonzo ezithile zenqaku. Ke ukuba uhambisa ulwazi olubuthathaka njengamagama, iidilesi, iipassword kwaye ezinye azikabhalwanga ngezinye iindlela, okanye awufuni kujonga ngalo lonke ixesha ukuba ibhalwe ngendlela eyahlukileyo, ndicebisa abaphandi.
Ndiyithetha yonke le nto ngokukhawuleza kuba ndifuna ukuthetha ngeNordPass, umphathi wegama eligqithisiweyo. Ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha ndifumana olu luvo lokuthanda, ewe, kodwa ukuba ndilayisha onke amagama am agqithisiweyo kule nkonzo inye kwaye emva koko loo nkonzo iqhekeziwe, ke bonke banamaphasiwedi am. Amaphasiwedi akho aya kubhalwa nge-password yakho eyintloko emva koko athunyelwe kumaseva atshonayo kwi-NordPass yotshaba.
Ukuba ufumene le datha, ngekhe bakwazi ukuyichaza ngaphandle kwephasiwedi yakho eyintloko. Kwaye ukuba icace, i-NordPass ayinayo iphasiwedi eyintloko nokuba yeyiphi, engaze ishiye ikhompyuter yakho. Akukho nto iqinisekileyo nge-100%.
Kuya kufuneka uthelekise ukhuseleko kunye nokulula kweendlela ezahlukeneyo. Njengolunye ukhetho kukusebenzisa ipassword efanayo kuyo yonke into. Oku kulunge ngendlela emangalisayo, kwaye ayikhuselekanga ngokumangalisayo, ayisiyongxaki.
Ulwazi lokhuseleko abantu ndithethile nalo ukuba ndivume ukuba umphathi wegama eligqithisiweyo lolona ludibaniso lokhuselo kunye nokunceda abantu abaninzi. Com / stevethat ekuzisela i-68% kwisicwangciso seminyaka emibini kunye nenyanga enye simahla. Ungalibali ukusebenzisa ikhowudi yenyuselo uSteve kunye nokuphuma.
Jonga i-NordVPN eli nqaku namhlanje. Xa uyenzile, musa ukulibala ukucofa u-Bhalisa kwaye siza kukubona ngexesha elizayo.
Yintoni iSavingsCool kwikhompyuter yam?
UkongaCoolyinkqubo enokubakho engafunekiyo emisela eyakhoikhompyuthaukuqhuba ummeli phantsi kolawulo lonjiniyela. ... Oku kuvumela inkqubo ukuba iguqule idatha ehanjiswayo xa umsebenzisi etyelela iiwebhusayithi. Oku kunokubandakanya ukongeza iskripthi sokulandela umkhondo okanye ukungenisa iintengiso kumaphepha ewebhu.Ngomhla we-25, 2017
Uyisebenzisa kanjani ipc kwimowudi ekhuselekileyo?
Qala kabusha ikhompyutha.
Thepha iqhosha le-F8 amatyeli aliqela ngaphambi kokuba iWindows iqale ukuze ufikelele kwimenyu yokuqalisa.
KhethaUhlobo olukhuselekilekwimenyu yokuqalisa okanyeUhlobo olukhuselekilengeNethiwekhi ukuba ufuna ukufikelela kwi-Intanethi.
Cinezela u-Enter kwaye ulinde ngelixa iWindows ilayisha ngaphakathiUhlobo olukhuselekile.
Le nkqubo iphela ngomyalezo wokuqinisekisa.
Ukuba yakho Windows 10 ikhompyuter ayenzi kakuhle kwaye kufanelekile, enye yeendlela ezilungileyo zokuyisombulula kukuyiqala kwiNdlela eKhuselekileyo, kwaye ukuba usebenzise iinguqulelo ezindala zeWindows njenge-XP okanye iWindows 7, uyazi ukuba Ukucofa kwiNdlela ekhuselekileyo F8 xa iWindows iqalile iza kuyeka ukusebenza kwaye kweli nqaku ndiza kukubonisa indlela entsha yokufumana Windows 10 kwiNdlela ekhuselekileyo. Le yiDave Techrescue apho ndisombulula khona iingxaki zekhompyuter, iingxaki ze-intanethi kunye netekhnoloji, ukuba unombuzo ongathanda ukundibuza wona, wushiye kumagqabantshintshi angezantsi kwaye ndiza kwenza konke okusemandleni ukuwuphendula kwaye khumbula ukubhalisa ukuze ungabinayo Ungaliphosi inqaku lam elilandelayo apho ndiza kuphendula khona umbuzo wakho, umbuzo wanamhlanje Ndiqala njani Windows 10 Kwimo ekhuselekileyo, njengoko usazi yenye yeendlela zokuqala iiWindows ngezi nkqubo ezisisiseko kunye neenkonzo ezisebenzayo ukuze ufumane yintoni enokubangela iingxaki kwikhompyuter yakho. Zimbini iindlela zokubeka Windows 10 kwiNdlela ekhuselekileyo kuxhomekeke ekubeni uyayifumana okanye akunjalo, ke masiqale sijonge ukuba senze ntoni ukuba ikhompyuter yakho ayizukuqala xa iwindow ikhuphuka, kodwa ufumana iingxaki okanye iimpazamo.
Emva koko unokubeka ikhompyuter yakho kwiMowudi eKhuselekileyo ukusuka kwiwindow ofuna ukuya kuyo kwimenyu yokuqala ukuze uvule ngoku ubambe iqhosha lokushiya ngelixa ucofa ukuqala kwakhona ubambe iqhosha lokushiya xa uqala ikhompyuter yakho kwesi sikrini. Jonga izicwangciso zokuQalisa iscreen Kunokuba luncedo ukuba ne-Intanethi xa usombulula ingxaki kwaye ukuba ukrokrela ukuba isoftware yakho yezokhuseleko inokubangela iingxaki, unokuzama i-8 eya kuthi ikhubaze ukhuselo lwe-anti-malware olusungulwe kwangoko, cinezela iNombolo I ' m cofa u-4 kwimowudi ekhuselekileyo kwaye ulinde ukuba iqale ikhompyuter, ungene kwiWindows kwaye uza kubona idesktop emnyama enombhalo omhlophe ngaphezulu othi sikwimo ekhuselekileyo ngoku ungayenza Nantoni na ekufuneka uyenzile, kwaye xa sele ukulungele ukuphuma kwimowudi ekhuselekileyo kwaye ubuyele kwimowudi eqhelekileyo yeWindows, cofa nje ukuqala kwakhona xa ikhompyuter ikhuphuka sibuyele kwimo yesiqhelo elandelayo, siya kufumanisa ukuba ungayifaka njani iMo eKhuselekileyo ukuba iWindows ayizukuqala ukuba ikhompyuter yakho iyenza ungaqali iWindows, kufuneka ungene kwiMowudi eKhuselekileyo yoTshintsho lweNdlela ngenye indlela, akukho ndlela imfutshane enqumlayo yokubeka ikhompyuter yakho kwiMowudi eKhuselekileyo, uya kufumanisa ukuba ukuba ikhompyuter yakho iyasilela ukuqala kathathu, izakulungiswa ngokuzenzekelayo xa ungazama ukuguqula ikhompyuter Vuliwe, kwaye xa iiWindows ziqala ukutshaja, cofa ubambe iqhosha lamandla ide icime ikhompyuter, uphinde inkqubo, vula ikhompyuter kwaye uyinyanzele ukuba icime de uyibone ilungiselela ukulungiswa okuzenzekelayo, emva kokulinda kancinci, Kuya kufuneka wenze le Sikrini Jonga ukuba iPC yakho ayikhange iqale ngokuchanekileyo ngoku nqakraza kwiZikhetho eziPhambili, emva koko usombulule ingxaki, emva koko ukhethe Iinketho eziPhambili xa ubona esi sikrini, jonga emazantsi eKhetho lokubuyisela iSeymour cofa kuyo kwaye ucofe kwiisetingi zokuqalisa Cofa kuQala kwakhona Ekugqibeleni ubona useto lweenkwenkwezi. Ngoku konke okufuneka ukwenze kukuthatha isigqibo sokuba loluphi uhlobo lweMowudi eKhuselekileyo oyifunayo kwaye ucofe iqhosha lenombolo ukuyilungiselela.
Oku kuncede ukuba ufumane ikhompyuter yakho ikwimo ekhuselekileyo. Nceda undazise kwizimvo ezingezantsi ukuba uqhubeke njani kwaye walifumana eli nqaku liluncedo, nceda umnike izithupha zakho ukuba ufuna ukubona ezinye izifundo ezivela kum, cofa kubuso bam obungezantsi kwaye ucofe iqhosha leRedsubscribe kwaye ukuba ulapha jonga nawaphi na amanye amanqaku am enkosi ngokubukela kwaye ndiza kukubona kwixesha elizayo
Uyikhupha njani ukonga 'intsholongwane epholileyo'?
Bamba kunye isitshixo sokuqala kunye noR. Type appwiz.cpl - & gt; KULUNGILE. Ngoku ukwiPaneli yokuLawula. Khangela ungeniso olukrokrisayo. Yikhuphe / yona. Chwetheza msconfig kwicandelo lokukhangela kwaye ucofe ukungena. Iwindow izakuzivelela: Qalisa - & gt; Sukhetha amangeno “Awaziwa” njengoMvelisi okanye ngapha koko ujonge okukrokrisayo. Ifayile entsha iya kuvulwa.
Iibhukumaki ze-yahoo zanyamalala
Luhlobo luni lwentsholongwane okonga intsholongwane epholileyo?
Le nkqubo iwela phantsi kwecandelo le-adware kwaye ibonakaliswa sisakhono sayo sokudibanisa kunye neebrawuza ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezinje ngeChannel kunye neFirefox kwaye ibonise iintengiso ezininzi ngeendlela ze popups, iibhena, imiyalezo yebhokisi, ukuqondisa iphepha kwakhona, njl. ukhathazekile ngokhuseleko lomatshini wakho kunye neefayile ezikulo- sukuba njalo.
Loluphi uhlobo lwe-adware ngaba ukonga kupholile?
Ukuba ufunda le nto ngoku, kusenokwenzeka ukuba ubulele kusulelo lwakutshanje nge-Savings Cool. Le nkqubo iwela phantsi kwecandelo le-adware kwaye iphawuleka kukukwazi kwayo ukudibanisa kunye nezikhangeli ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezinje ngeChannel kunye neFirefox kwaye ibonise iintengiso ezininzi ngeendlela zeepopups, iibhena, imiyalezo yebhokisi, ukuhanjiswa kwephepha njalo njalo.
Ziziphi iziphumo ebezingalindelekanga zokonga imali?
Esinye isiphumo esibi esingalunganga soGcino olupholileyo sinokuba sesichengeni sokusebenza komatshini wakho. Isenokuba livila, isikhangeli sakho sinokuqalisa ukuphazamiseka kwaye iinkqubo ezithile zisenokuqalisa ukungasebenzi kakuhle.